दिल्ली यात्राको अनुभूति | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / दिल्ली यात्राको अनुभूति
दिल्ली यात्राको अनुभूति
Posted by: युगबोध in विचार March 12, 2018	0 103 Views
मलाई बिरामी लगे र नया दिल्ली जानुपनेर् भयो  । हामी चार जना गत १४ गते दाङबाट दिल्लीको लागि छुट्ने बसमा हे मन्तपुरबाट चढे र गयांै  । बसमा यति भीड हुदो रहे छ कि ६० जनाभन्दा बढी यात्रु थियांै  । लामो दूरीको यात्रामा बसको अगाडिको भाग र गल्लीमा समे त बसे को दे खियो  । दिउ“सो ३ बजे चढे को अकोर् दिन अर्थात १५ गते २ बजे दिल्लीको काश्मिरी गे टको बस अड्डामा उता¥यो  । सो चे ं सुगम, सुलभ र सस् तो यात्रा हामी ने पालीले कहिले पाउ“ला भने र भालुबाङबाट छुट्ने बस भएको ले अन्धाधुन्दा टिकट दिइएको रहे छ । एउटै सीटमा तीन जनाको समे त टिकट दे खियो  । यसको कडा निगरानी गनेर् निकाय प्रभावकारी कहिले बन्लान् भने र सो चिरहे को छु । भाषण गर्न सजिलो े हुन्छ । व्यवहारमा उतार्न त इच्छाशक्ति र पारदर्शी शासन व्यवस् था हुनुपदोर् रहे छ । अन्यथा भो टको लागि गरिने भाषणले मुलुकको विकास हुन सक्दै न । यस्तै –यस्तै सोच्दै दिल्लीको यात्रा गनेर् क्रममा गै रकानुनी ढंगबाट ते स्रो मुलुक मुख्यतः अमे रिका जाने हरुको पनि बसमा राम्रै उपस् िथति दे खियो  । एक जना के टीलाई त तुलसीपुरदे खि थो रै तल पुग्दा बस रो के र झारिदियो  । उनले एकजना महिलाको पा“च लाख रुपै या“ ठगे र जान लागे को भने र झारियो  । यस् तै गरी रुपै डिहा पुगे र भन्सारमा गाडी रो किएको बे ला एकजना महिलाले कन्ट्रे क्टर ड्राइभर सग एकान्तमा कुरा गरे र हिडे को थो रै बे रमा ने पालबाट असई त्यहा पुगे र फलानो महिला हुनुहुन्छ भने र खो ज्न थाले  । पछि उनलाई त्यो बसमा आएको दे खिएन । ने पालको चे कपो ष्टमा नभई भारतमा पुगे र खो जे को दे ख्दा अचम्म परियो  । एकजना वामपन्थी पत्रकार पनि चो र बाटो बाट अमे रिका जाने को भीडमा दे खे र उहा“लाइ ५० लाख खर्च गर्नु पर्दछभन्छन । तै पनि जो खिमै जो खिम व्यहो र्नुपनेर् यो भन्दा त त्यो रकमले यहीं पे शा गर्दा राम्रो हो ला भने र भने ं । उहाले हामीलाई पठाउने एजे ण्टले धे रै लाई पठाइसके काले भरो सा छ भन्नुभयो  । त्यसमा एकजना शिक्षिका पनि हुनुहुदो रहे छ । वर्तमान सरकारले यसतर्फ कहिले दे खि सो च्ला ?
म २०४० सालसम्म दिल्ली जाने आउने गरी रहन्थें  । त्यो बे लाको दिल्ली र अहिले को दिल्लीमा आकाश पाताल परिवर्तन भइसके को रहे छ । यो ३४ वर्षको अन्तरमा दिल्लीलाई कंक्रिटको शहरबाट जंगलको शहरमा रुपान्तरण गर्न सफल भएको रहे छ । जताततै सडक भरि ठूलाठूला प्रजातिका रुखहरु दे खिन्थे भने राजे न्द्रनगरबाट नया“ दिल्ली रे लवे स् टे शन जा“दा त ठूलै वन क्षे त्र दे ख्न पाइयो  । पहाडगञ्जमा त कस् तो पनि दे खियो भने एउटा रुखको हा“गाले घरको गारो छे डे र टाढासम्म फै लिएको छ । तर पनि काटिएको रहे नछ । बुझ्दा सरकारी रुख भएकाले जति क्ष ति गरे पनि काट्न पाइ“दै न भने को सुनियो  । मन त थियो हे लिको प्टर चढे र दिल्लीको शहर हे नेर् । तर के गनेर् , आर्थिक अभावका कारण त्यो सम्भव हुने कुरै भएन । यदि आकाशबाट हे नेर् हो भने घरभन्दा बढी रुखहरु दे खिन्छन् जस् तो लाग्यो  । राजे न्द्रनगरको सडक छे उमा ठूलाठूला आ“पका रुख रहे छन् । ढपक्क फुले का छन् । कहिले हो ला हाम्रो राजधानी यस् तो  । भारतीयहरुमा रुख बिरुवाप्रति बढी चासो भएको दे खियो  । किनभने बाटो मा पनि किसानहरुले निजी वन प्रशस् त लगाएको दे खियो  । ससाना क्षे त्रमा पनि वृक्षारो पण गरी भारतीय वन विभाग ले खे को दे खियो  । हामीलाई भएकै रुख बचाउन सारै कठिनाई भइरहे को बे ला झन नया“ वन क्षे त्र बन्ला भने र कल्पना गर्नु बे कार छ । औ द्यो गिकीकरणले जनसंख्या शहरमा के न्द्रित भइरहे काले गाउ“को खे तीयो ग्य जमिन आवासको लागि प्रयो ग गर्नुपरे को दे खिएन । यसै कारणले निजी वन बनाउने को हो ड पनि लागे को हुन सक्छ । विशाल क्षे त्रफल भएको भारतको ठूलो हिस् सा शहर के न्द्रित हु“दा खे तीयो ग्य जमिन बचे को र सिंचाईको राम्रो व्यवस् था भएको ले उत्पादन अत्यधिक हुने कुरो भइहाल्यो  । त्यहा“ मसिनको माध्यमबाट खे ती हुने भएकाले कम श्रमशक्तिले धे रै उत्पादन गर्न सकिने भएको ले नै लागतभन्दा उत्पादन बढी हुनु स् वाभाविकै हुन्छ । जता हे रे पनि रुखले हो स् वा कृषि बालीले गर्दा हो स् जताततै हरियाली दे खियो  । भारतबाट नकारात्मक काम, कुरो को नक्कल हामी ने पालीले चा“डै गर्दछौ ं । तर त्यहा“ भएका राम्रा कामको नक्कल कहिले गनेर् हो ला ?
भारत सरकार र सामाजिक संस् थाहरु पर्यावरणप्रति सजग भएको दे खियो । भारतका मुख्य शहरहरुको प्रदूषण कुन स् तरमा छ भने र दै निक पत्रिकामा दिदा रहे छन् । सामान्य, खराब, अति खराब र खतरनाक भने र दिदारहे छन् । हामी जा“दा दिल्लीको प्रदूषण खराब भएको पाइयो । जसले गर्दा गुणस् तरीय मास् क लगाएर हिड्नुपनेर् भयो  । त्यही गरियो  । उद्यो गको कारणले प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक मात्रामा हुने गर्दछ । भारत विकासको गतिमा दौ डिएको छ । उद्यो गधन्दा व्यापक मात्रामा छन् । त्यसै ले प्रदूषण बढे को छ । यही कारण पनि हुनसक्छ । रुख विरुवा रो प्ने र संरक्षण गनेर् सवालमा एकदमै सचे त भएको पाइयो  । यसबाट हामीले समयमै सो च्नुपर्दछ । अब उद्यो गधन्दालाई कम भन्दा कम प्रदूषण गनेर् कसरी बनाउन सकिन्छ । यसतर्फ भारत लगायत दक्षिण एशियाका दे शहरुले सो च्नुपर्दछ । किनभने भूगो ल एउटै सीमामा छ । भारतमा हुने प्रदूषण फै लिएर ने पालसम्म आइपुग्छ । रे गीस् तानको बालुवाको कण त ने पालसम्म आइपुग्छ भन्ने गरिन्छ भने प्रदूषित हावा नआउने कुरै भएन । हामीले प्रदूषण नफै लाए पनि प्रभावमा सहजै पर्छांै  । त्यसै ले रुख विरुवा लगाउन र संरक्षण गर्न सजग बनांै  । जै विक विविधता संरक्षणमा सचे त बनांै  । भारतका उद्यो गपतिले ठूला–ठूला धार्मिक र सामाजिक संस् थालाई सहयो ग गरी राम्रो स“ग परिचालित गराएका छन् । आफै पनि भएका छन् । ने पालका उद्यो गपतिहरुले गुण्डा, आवराहरु पाले र राखे का छन् । उनीहरुले पर्यावरण र सामाजिक क्षे त्रमा काम गनेर् संस् थाहरुलाई सहयो ग गर्नुपर्दछ भन्ने अलिकति पनि सो चे को दे खिएन । समाजलाई विभिन्न किसिमले प्रभावित बनाउ“छन् । यति मात्रै हो इन प्रदूषित वातावरणमा बस् न बाध्य पार्दछन् । तर त्यस क्षे त्रमा आफू त काम पटक्कै गर्दै नन् गनेर् लाई पनि आर्थिक, भौ तिक सहयो ग गदैर् नन् । बरु ने ताहरुलाई चुनावी खर्च दे खि पके ट खर्चसम्म दिने गर्दछन् अनि मनपरीढंगले प्रदूषण फै लाउ“छन । जनतामा चे तना छै न । प्रदूषणले तत्काल र दीर्घकालमा कस् तो प्रभाव पार्दछ भने र सो च्न सक्दै नन् । यसै को फाइदा उद्यो गपति र ने ताहरुले उठाइरहे का छन् । तर भारतीय उद्यो गीहरु अलि अगाडि छन् । नया“ दिल्लीको मुख्य भूभागका सडक सफा दे खिए पनि भित्री सडकमा भने यत्रतत्र फो हो र फाले को दे खियो  । जथाभावी फो हो र फाल्ने मा हामी ने पाली भन्दा कम रहे नछन् दिल्लीबासीहरु । हुन त समग्र भारतलाई हे नेर् हो भने सरसफाइमा ने पाल अगाडि नै भएजस् तो लाग्यो  । फो हो र जथाभावी गर्नु र फाल्नुह“ुदै न भन्ने चे तना न भारतीयमा दे खियो न त ने पालीहरुमा नै  । त्यसै ले जनचे तना फै लाउन अत्यन्तै आवश्यक दे खिन्छ ।
म दिल्ली जानुको उद्दे श्य दुईजना विरामीहरुलाई औ षधि उपचार गराउनु थियो  । दिल्लीस् िथत सर गंगाराम अस् पतालमा गयौ ं । त्यो अस् पताल हामी साधारण ने पालीको पह“ुचमा रहे छ । त्यहा“ गएपछि थाहा भयो ने पालका नामी अस् पताल ग्रान्डी र नर्भीकले समे त त्यस अस् पतालमा रिफर गर्दा रहे छन् । ती विरामीका आफन्तहरुस“ग भे टपछि थाहा भयो  । दाङदे खि चितवन काठमाडांै जा“दासम्म टीबी पत्ता लाग्न सके न तर त्यहा“ गएपछि टी.वी. भएको थाहा भयो  । अहिले बिरामीहरु ठीक हु“दै गइ रहे का छन् । ने पालमा टी.वी. रो ग पत्ता लगाउन सक्दै नन् भने कसरी विश्वास बढ्छ ने पालका अस् पतालप्रति ? सरकारले साधन सम्पन्न अस् पताल बनाउन र ल्याबमा विज्ञहरु राख्ने तिर ध्यान दिनु पर्दछ । ने पालका अस् पताल चाहर्दा चाहदैर् सम्पत्ति सिध्याएर बाहिर जानु भन्दा पहिले नै गए राम्रो दे खियो  । त्यसै ले दाङबाट दिल्ली जाने बसहरुलाई व्यवस् िथत गराउनुप¥यो । सुविधा सम्पन्न बसहरु सञ्चालनमा ल्याउनुप¥यो  । बसमा विरामीको निम्ति स् पे सल सिट बनाउनुपनेर् दे खिन्छ । यसतर्फ समयमै सो च्नुपनेर् दे खिन्छ । सिट भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने कडा व्यवस् था र निगरानी गर्नुप¥यो  । प्रहरी चे कपो स् टमा एक सय रुपै या“ छो डिदिने प्रथा हटाउन पहल गर्नुपनेर् दे खिन्छ ।
Previous: संघीयता, समाजवाद र शिक्षा
Next: आगलागी नियन्त्रणमा टिनका छाना प्रभावकारी